Sunday March 08, 2020 - 17:10:15 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Kadib caadis ay dowladda Mareykanka ay saartay Farmaajo iyo Uhu Kenyatta oo ku aaddan khilaafka labada dhinac udhaxeeya ayay dowladda Kenya wafdi heer sare ah usoo dirtay magaalada Muqdisho.
Fred Matiangi oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo Amniga Kenya ayaa maanta socdaal ku tagay garoonka caalamiga Muqdisho wuxuuna gudaha Villa Somalia kulan kula yeeshay Farmaajo.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in wasiirka arrimaha gudaha Kenya uu hoggaamiyaha dowladda Federaalka ugudbiyay warqad rasmi ah oo uu ka siday Uhuru Kenyatta, farrinta Kenya ka timid ayaa salka ku haysa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka labada dhinac udhaxeeya.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Nairobi ayaa Farmaajo iyo Uhuru ku cadaadisay in ay wadahadal yeeshaan ayna xal ka gaaraan khilaafka udhaxeeya ayna umidoobaan dagaalka ka dhanka ah Shabaabul Mujaahidiin.
Dowladda Kenya ayaa taageera lixaad leh siinaysa Axmed Madoobe hoggaamiyaha maamulka 'Jubbaland', dagaallo isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay degmada Beled Xaawo ayaa ka caraysiiyay dowladda Federaalka kadib markii gaadiidka gaashaaman ee dowladda Kenya ay si toos ah dagaalka uga qeyb galeen iyagoo taageera siinaya Cabdi Rashiid Janan oo ah wasiirka ammaanka maamulka Axmed Madoobe.
Lama oga sida Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta isugu fahmi doonaan arrinta Axmed Madoobe iyadoo la ogyahay in dowladda Federaalka ay dadaal walba ku bixisay sidii ay ukala diri laheyd maamulka Kismaayo kajira halka Kenya ay maamulkaas naasnuujinayso.